अध्यक्ष प्रचण्डको वैचारिक सम्वोधन : म पदको होइन, समाजवादी क्रान्तिको बहसमा छु (पूर्णपाठ) – cmprachanda.com
अध्यक्ष प्रचण्डको वैचारिक सम्वोधन : म पदको होइन, समाजवादी क्रान्तिको बहसमा छु (पूर्णपाठ)
२०७७ श्रावण ९ गते २२:२८ मा प्रकाशित
आज हामी कमरेड पुष्पलालको स्मृतिमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्दैछौं। स्वयम् पुष्पलालले के भोग्नु भयो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। पुष्पलालले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना एउटा ऐतिहासिक र युगान्तकारी प्रक्रियाको थालनी गर्नुभएको हो। जसको प्रक्रियामा तपाइ हामी हुर्केका छौं। जन्मेका छौं। तर, स्वयम् पुष्पलाल २००८ सालपछि महासचिवबाट हटाइनु, २०१० सालमा महासचिव बन्नबाट रोकिनु, २०१४ सालमा उहाँकै नीति र विचार पारित हुने तर नेतृत्वमा रायमाझी हुने बडो विडम्बनापूर्ण स्थिति पुष्पलाल कमरेडले भोग्नुभयो। नीति एउटाको तर नेतृत्व त्यसका विरोधीको। तपाई हामीले यसो हेर्‍यौ भने अहिले पनि त्यस्तै भएको हो कि ? नीति र विचार एउटाको हुने तर नेतृत्व अर्कैको हुने भएको हो कि। आज हामीले भोग्नुपरेको समस्याको चुरो त्यतै कतै छ कि भनेर हेर्न पनि जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने २०१४ मा पुष्पलालको जनवादी क्रान्तिको नीति पारित भएर पनि राजापरस्त रायमाझी आउने जुन प्रवृत्ति देखियो, त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्ने र भविष्यमा त्यस्तो प्रवृत्ति नहोस् भनेर हेर्नुपर्ने छ। यदि त्यस्तै हुने हो भने १४ सालपछि जस्तो स्थिति आयो, त्यस्तै हुनेछ। २०१४ सालपछि नीति एउटा र नेतृत्व अर्को भएपछि त्यो कम्युनिष्ट आन्दोलन दुर्घटनामा जाने नै थियो। त्यसमा कसैको पवित्र इच्छा हुँदैमा रोकिने कुरा होइन। त्यसको आफ्नो वैज्ञानिक विधि छ। नियम छ। त्यहीअनुसार अघि बढ्छ। २०१७ सालमा दोस्रो महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीको हालत के भयो। र २०१९ को महाधिवेशन पछि कसरी पार्टी छिन्न भिन्न हुने स्थिति भयो भन्ने इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामीले मार्क्स एंगेल्सले भनेका ती अन्तर्निहित वैज्ञानिक वस्तुवादी सच्चाइ हामीहरूले आफैले पनि हाम्रो कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भोगेको देख्न सकिन्छ।
र त्यो प्रक्रिया पार्टीहरू पुनर्गठनका प्रयास भए। त्यसबाट कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलन ध्वस्त भए त ? भएनन्। अर्को पुस्ताले फेरि झण्डा उठायो। फेरि नयाँ सिराबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनहरू अगाडि बढाउने प्रयास भए। अगाडि बढे। त्यही क्रममा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन दुई धारका रूपमा अघि बढ्यो जसलाई २०७५ आएर हामी एकताबद्ध गर्ने ठाउँमा आइपुग्यौ।
निकै ठूलो उत्साह र निकै ठूलो भरोसा आम जनता र पार्टीभित्र पैदा भयो। तपाई हाम्रो जिज्ञासा अब कम्युनिष्ट पार्टी के हुन्छ ? स्थायी कमिटीको बैठक, केन्द्रीय समितिको बैठक के हुन्छ, महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन। एकता प्रक्रिया सफलतापूर्वक टुङ्गिन्छ कि टुङ्गिँदैन वा महाधिवेशनसम्म नपुग्दै पार्टी विभाजन त हुने होइन भन्ने तमाम आशंका तपाईँहरूको मनमा छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। देशभरका कार्यकर्ता र जनताका कुरा हामी अनुभूत गर्छौँ। हामीले गठबन्धन बनाएर एउटै उम्मेदवार बनाएर चुनावमा जाँदा घोषणापत्रका केही आधारहरू बनाएका थियौं। हामीले उन्नत अर्थतन्त्रसहितको सम्वृद्ध नेपालको एउटा सपना दिएका थियौं। हामीले सामूहिक रूपमा नेपाललाई समाजवादी दिशातिर लान चाहन्छौँ भनेका थियौं। हामीले यसरी अभियान चलाउँदै गर्दा जुन उत्साह पैदा भएको थियो, त्यसले जनतामा आशा र भरोसा पैदा भएको थियो। त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा हामीले त्यसलाई कति कायम राख्न सक्यौं ? सक्यौं कि सकेनौं ? सकेनौं भने के कारणले सकेनौं के त्यस्तो कारण परेको छ ?
अहिले बिहानै बेलुकै समाचार सुन्दा कुन नहुने समाचार सुन्नुपर्ने हो भनेर जुन सन्त्रासयुक्त मन लिएर बस्नुपरेको अवस्था छ, यति छिटै, एकता प्रक्रिया नटुंगिँदै यस्तो अवस्था किन पैदा भयो ? आजको महत्त्वपूर्ण यक्ष प्रश्न यही छ। यसको जवाफ पार्टीमा खोज्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौं। कम्युनिष्ट पार्टी भनेको सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएर चल्ने पार्टी हो। त्यस्तो सामूहिक नेतृत्व हामीले विकसित गर्न सक्यौं कि सकेनौं ? हेर्ने हो भने कता कता दुई वर्षसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक गर्न सकेनौं। जबकि ६ महिनामा बैठक गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ। समस्या आउँदा सामूहिक रूपमा छलफल गर्ने र त्यसबाट जे निष्कर्ष आउँछ, त्यसको पालना गर्ने नीति लिएका थियौं। त्यो नीति अपनायौं कि अपनाएनौ भन्दा बैठकै नबसेपछि सामूहिक छलफल र निष्कर्ष भन्ने नै भएन।
पार्टी भनेको विवेक हो, सरकार भनेको सत्ता हो। कम्युनिष्ट पार्टीमा विवेकले सत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यो भनेको पार्टीले सत्ता चलाउने हो। सरकारले पार्टीमाथि हैकम चलाउनेजस्तो स्थिति भयो भने त्यो तपाई हाम्रो वैज्ञानिक मान्यताभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ। पछिल्लो दुई वर्षलाई हेर्दा कतै विवेकले सत्तालाई चलाउने नभई सत्ताले विवेकलाई चलाउने अवस्था भएको हो कि ? समूहको अधीनस्थ व्यक्ति हुनेभन्दा कतै व्यक्तिको अधीनस्थ समूह भएर जाने खतरा पो पैदा भएको हो कि ? तपाईहरुले यसमा पक्कै विचार गर्नुभएकै होला। समूहको नेतृत्वमा समूह अन्तर्गत व्यक्ति हुने हो। त्यसकारण सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई कम्युनिष्ट पार्टीभित्र स्थापित गर्ने मार्क्सकै पालादेखि बहस गरिएको हो।
हामीले जनतालाई सुशासन दिन्छौं भन्यौं। तर श्रृंखलाबद्ध रूपमा उठिरहेका प्रश्नहरू र भ्रष्टाचारबारे उठिरहेका प्रश्नहरूको निरूपणमा हामी कति सफल भयौं ? वा भएका छैनौं भन्ने प्रश्नहरू छ। हामीले विचारलाई प्राथमिकता दिने या पावरलाई भन्ने प्रश्नमा हामी कसरी गइरहेका छौं ? अघि यहाँ कुरा आयो- हुँदा हुँदा हाम्रो पार्टीमा त बैठक बस्न पनि निकै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने र बैठक बसिसकेपछि बैठकको ओझ महत्त्व र गरिमालाई कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने डिबेटहरु पनि हामीले सुन्नु परेकै छ। पार्टीले सामूहिक रूपमा निर्णय गर्‍यो भने सापेक्षिक रूपमा सही हुन्छ।
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई त्यसमा धन्यवाद पनि भन्यौं किनभने पार्टीले मात्रै निर्णय गरेर उहाँले नमानेको भए त्यो लागू हुन सक्दैनथ्यो। त्यसको वैधानिक हैसियतका निम्ति सरकार चाहिन्थ्यो। तर, यदि फेरि पार्टीको सामूहिक विवेकबाट भएको निर्णयलाई पालन गरेको सबै चाहिँ व्यक्तिको खल्तीमा हाल्ने प्रयास भयो भने त्यो इमानदार प्रयास हुन सक्दैन। त्यसले फेरि अर्को विभ्रम पैदा गर्छ। त्यस कारण यो सिंगो राष्ट्रले गर्व गर्ने कुरा हो। सबैको राष्ट्रिय एकताको प्रतिफल पनि हो। कम्युनिष्ट पार्टीको सामूहिक विवेकको प्रतिफल पनि हो। र सरकारले पनि त्यसलाई वैधानिकता प्रदान गरेकाले सरकार पनि धन्यवादको पात्र छ। यो पो सही कुरा हो। अनि त्यही पार्टी जसले यो नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गराउन निरन्तर दबाब दिए, उनीहरू चाहिँ राष्ट्रघाती र दलाल, जुन सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्न यति ढिलो गर्‍यो त्यसको चाहिँ देवत्वकरण ? यो हुन सक्दैन। हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा छ यो। त्यस्तो भयो भने त्यहाँ इमानदारिता र पारदर्शिता हुँदैन। त्यहाँ विवेकले काम गरेको भन्ने हुँदैन। हामी यो कुरामा सबै सचेत हुनुपर्ने कुरा जरुरी छ। हामीले चुनावमा जे कुरा भनेका थियौं, त्यसरी हामी जान सकेका छैनौं।
अहिले देशभरि केही कार्यकर्तालाई नारा जुलुशमा लगाउने कोसिस भएको छ। तपाईहरुले देखिराख्नु भएकै छ। हामी पार्टीलाई कसरी मिलाएर लैजाने, विवाद कसरी मिलाउने, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा कसरी एकताबद्ध भएर जाने भन्ने छलफल र बहस गरिरहेका छौं, तर देशभरि जिन्दावाद र मुर्दावादका नारा लगाइएका छन्। देशभरिबाट साथीहरूले हामीलाई सोध्छन्, हामी के गर्ने ? हामीले धैर्य लिनुस् र पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुस् भनेर भनेका छौं। तर, त्यस खालका प्रचारहरू भएका छन्। यसबाट पार्टी संकटमा छ भन्ने देखाएको छ। पार्टी सामान्य स्थितिमा छैन।
पार्टी एकताको प्रक्रियामा हामीले केही आधारहरू बनायौं। सबैभन्दा पहिला वैचारिक राजनीतिक आधार। वैचारिक ढंगले मार्क्सवाद र लेनिनवादलाई हाम्रो पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त हो भनेर सर्वसम्मतमा मानेका छौं भने राजनीतिक कार्यदिशाको रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद, २१ औँ शताब्दीको जनवाद र माओवाद सम्बन्धी मान्यतालाई अबको नयाँ चरणमा विकसित गर्नुपर्छ परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्दै समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई अहिलेको हाम्रो कार्यदिशा भन्यौं। तर तपाई हामीले अहिले फेरि कता कता फेरि हामी पछाडि फर्किन खोजेका संकेतहरु देखिएका छन्। विभिन्न ठाउँमा कहिले २१ औँ शताब्दीको जनवाद जिन्दावाद भन्यौं भने या माओवाद जिन्दावाद भन्यौं भने अनि अर्कोतिर न महाधिवेशनको निम्ति छलफल खुल्ला गरेका छौं। यस्तो अवस्थामा त्यसो भनियो भने त्यो अगाडि गएको ठहरिँदैन। त्यो पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको ठहरिँदैन। पार्टी विभाजनतिर जबर्जस्त गइरहेको छ भन्नेतिर मात्र संकेत गर्छ।
को व्यक्ति पदमा जाने को नजाने भन्ने बहस मुख्य रूपमा होइन। विचारसँग जोडिएर नेतृत्व पनि आउँछ। तर प्राथमिक कुरा र प्रधान कुरा विचार नै हो। म के भन्न चाहन्छु भने, कुनै पनि स्थितिमा पार्टी विभाजन हुनबाट रोक्न अन्तिम तहसम्म हामी प्रयास गर्दैछौं। र पार्टी विभाजन हुन दिइने छैन भन्ने विश्वास तपाइलाई दिलाउन चाहन्छु। पार्टीलाई एकताबद्ध राखिने छ। पार्टीलाई विचार केन्द्रित बनाइने छ। र विधि र पद्धतिमा चल्ने पार्टी बनाइने छ। यस बहसबाट स्पष्ट रुपमा विचार पनि आउने छ। विधि र पद्धतिमा चल्ने प्रक्रियालाई जन्म दिनेछ। त्यसकारण हामी आतिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन।
(नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको ४२ औं स्मृति दिवसका सन्दर्भमा २०७७ श्रावण ९ गते पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सम्वोधनको सम्पादित सामग्री।)
By cmprachanda	 Jul 24, 2020